Ukuphupha kweKanarienvogel ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iicanaries ziphakathi kwezona zilwanyana zidumileyo kuluntu lwethu. Uninzi, ngakumbi olunye, luyakuxabisa ukungabi bodwa xa befika ekhaya ebusuku. Kwangelo xesha, i-canary ayifuni ukuzinikezela kakhulu kwaye ke kulula ukuyigcina.
Kananjalo kunokwenzeka ukuba abantu baphuphe ngesi silwanyana. Babona i-canary, bayayithenga okanye bayinike, okanye bayive icula ephupheni.
Ukutolikwa kwala maphupha kunokuba bhetyebhetye kakhulu, kuxhomekeke kwimeko ngqo zephupha.
1 Uphawu lwephupha «canary» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «intaka ye-canary» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «intaka ye-canary» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «canary» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu "lwe-canary" luhlala luphawu oluqinisekileyo ngokoluvo ngokubanzi. Nabani na obona intaka ephupheni uya kuyenza kungekudala. abahlobo abatsha Dibana. Kwangelo xesha ibhekisa kwikhaya apho ukuphupha uzive ukhululekile.
Ukuphulaphula i-canary kuhlala kubonakalisa ukuqala kokonwaba, ixesha elifanelekileyo. Abo bachaphazelekayo banokujonga phambili kumava amnandi kwaye, ukuba abatshatanga, kungekudala baya kufumana iqabane abaza kutshata nalo.
Ukongeza, ukuba ngumnini okanye ukucula i-canary nako impumelelo yobungcali kwaye butyebi isithembiso. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba umntu ophuphayo ngumntu omncinci, okanye i-canary ephupheni ihlala kwigumbi lokunethezeka. Ilifa elilungileyo lidla ngokubhengezwa yi-canary enikwa umntu ochaphazelekayo.
Kwelinye icala, nabani na onika isilwanyana esinjalo ephupheni kufuneka asukume. Ukuphoxeka lungisa. Nokuba intaka inombala oqaqambileyo okanye isweleke ephupheni, oku kubonisa ukuba iminqweno ethile yephupha ayizukufezekiseka. Endaweni yoko, isoyikisa ukuwela kwizithembiso ezingeyonyani. Ngokuqinisekileyo kufuneka uzame ukungabi nethemba elininzi kwizinto ezithile kwaye usoloko ubuza iinjongo zabanye abantu. Le kuphela kwendlela yokuchonga ukuba yeyiphi eyona nto ithethwa ngabantu.
Uphawu lwephupha «intaka ye-canary» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokombono wengqondo, i-canary ihlala ifanekisela umntu ephupheni. ubulolo bangaphakathi lomntu ochaphazelekayo. Uziva ulilolo ebomini kwaye unqwenela ukuba nobuhlobo, uthando kunye nokukhuseleka.
Kwangelo xesha, amaphupha e-canary abonisa imvakalelo ye Ubukhoboka y ulawulo. Ukuphupha uziva ungathintelekanga ukuba uthintelwe yinkalo ethile yobomi bakho bemihla ngemihla kwaye ukholelwa ekubeni ayinakuphuhla ngokukhululekileyo.
Kwakhona, kunzima ukuthemba abanye kwaye unikezele ngolawulo. Ngaphantsi kwazo naziphi na iimeko ufuna ukuba owasemzini abenefuthe kwindlela yakho yobomi okanye angavunyelwa ukuba nguwe Kubalulekile ukuba wazi le micimbi kwaye usebenze kuyo.
Uphawu lwephupha «intaka ye-canary» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, ii-canaries emaphupheni ziyazibonisa mphefumlo yephupha, elilawulwa ziimvakalelo ezahlukeneyo.